Suuqgeynta Barnaamijka Suuqgeynta: Ciyaartoyda Muhiimka ah iyo La Wareegyada | Martech Zone
In ka badan 142,000 ganacsi oo isticmaalaya suuqgeynta qalab otomaatiga ah. Sababaha 3-da ah ee ugu sarreeya ayaa ah in la kordhiyo tilmaamaha u qalma, la kordhiyo wax soo saarka iibka, iyo hoos u dhaca suuq geynta. Warshadaha otomaatiga suuqgeynta ayaa ka koray $ 225 milyan illaa $ 1.65 bilyan 5-tii sano ee la soo dhaafay
Xogta soo socota ee ka socota Soodhawaynta Qalabka Suuqgeynta wuxuu faahfaahin ka bixinayaa isbeddelka software-ka otomaatiga suuq-geynta ee ka socda Unica muddo toban sano ka hor ah iyada oo loo marayo $ 5.5 bilyan oo qiimihiisu yahay helitaanno na keenay xilligan, oo ay ku jiraan meheradaha otomatiga ee suuqgeynta soo socda:
Act-On - Madal otomaatig suuqgeyn ah oo loo dhisay inay kaa caawiso inaad u keento khibrad aad u fiican macaamiishaada. Laga soo bilaabo wacyigelinta calaamadaha iyo baahida jiilka, illaa haynta iyo daacadnimada, tikniyoolajiyadeena ayaa u suurtagelisa suuqleyda inay ka soo baxaan tartanka oo ay kaxeeyaan natiijooyin wanaagsan.
Ololaha Adobe - Xallo dhowr ah oo kaa caawinaya inaad shakhsiyeysato oo aad ololeyaal gaarsiiso dhammaan kanaalladaada qadka iyo khadka. Ololuhu wuxuu bixin karaa astaamo macmiil isku dhafan, iskuxidh olole iskuxidh, marin suuq geyn ah iyo iimayl ku habboon waqtiga dhabta ah.
Xalalka Suuqgeynta ee IBM - Qeyb ka mid ah faylalka ganacsiga ee IBM, Xalalka Suuqgeynta ee IBM waxay kuu suurta gelineysaa inaad macaamiishaada kala qeyb gasho wadahadallo aad u khuseeya, wada hadal ku saabsan kanaallada dijitaalka ah, bulshada, mobilada iyo dhaqanka. Waad shakhsiyeyn kartaa oo aad hagaajin kartaa ololeyaasha iskudhafka iyo dadaallada suuqgeynta dijitaalka ah si loogu beddelo martida macaamiisha soo noqnoqda iyo u doodayaasha.
Shaqooyinka Hubspot Ku kobci xiriiradaada iyo macaamiishaada kobcinta ujeedada ku saleysan, dhibcaha hogaaminta, ogeysiisyada gudaha, waxyaabaha ku jira websaydhka shakhsi ahaaneed, caqli galinta qaybta, iyo qaybinta.
IBM Silverpop - Iswaafajiya isdhexgalka shakhsi ahaaneed isla markaana gaarsiiya fariin macno leh oo aad u khusaysa lana socota talaabo kasta oo nolosha macaamiisha ah.
Infusionsoft - Waxaa laga soo dhisay salka hoose si loo xaliyo dhibaatooyinka ganacsiga ugu waaweyn. Haddii aad raadineyso siyaabo caqli badan oo aad ku qiyaasi karto markaad koraysid, barnaamijka 'Infusionsoft' oo awood badan ayaa kaa caawin kara. Maamul hawlaha maalinlaha ah ee kaa gaabiya — si otomaatig ah.
Suuqa - Soo hel oo la hawlgal macaamiisha saxda ah. Ka caawi inay bartaan waxay rabaan inay ka ogaadaan waxyaabahaaga markay bilaabayaan safarkooda. Wax ka baro suuqgeynta raadinta, bogagga degitaanka, shaqsiyadeynta websaydhka, foomamka, warbaahinta bulshada, iyo dabagalka dabeecadda.
Suuqgeynta Microsoft Dynamics - Xalka maaraynta suuq geynta maaraynta kheyraadka suuq geynta, qorsheynta, fulinta, iyo Analytics dhammaan kanaallada oo dhan — emayl, dijital, bulsheed, SMS, iyo mid dhaqameed.
Oracle Eloqua - Waxay awood u siisaa suuqleyda inay qorsheeyaan oo ay fuliyaan ololeyaal iyagoo u keenaya khibrad macmiil shaqsi ahaaneed rajadooda. Ololeyaashu waxay si weyn u cabbirayaan dhagaystayaasha kanaallada oo dhan oo ay ku jiraan iimaylka, muujinta raadinta, fiidiyaha, iyo moobiilka. Iyada oo la adeegsanayo maareyn hoggaamineed oo isku dhafan iyo abuurista olole fudud, xalkayagu wuxuu ka caawiyaa suuqleyda inay la qabsadaan dhagaystayaasha saxda ah waqtiga saxda ah safarka iibsadaha. Kooxaha iibku waxay xiri karaan heshiisyo badan si dhakhso leh, iyagoo kordhinaya suuq geynta ROI iyada oo loo marayo aragti waqtiga dhabta ah.
Suuqgeynta Suuqa iibinta - Suuqgeynta 'Salesforce Cloud Cloud' waxay u oggolaanaysaa ganacsiyada nooc kasta ha lahaadee inay kobciyaan ganacsigooda iyagoo adeegsanaya suuqgeynta iimaylka heer xirfadeed. In kasta oo aanu si gaar ah u jirin suuqgeynta qalab otomaatiga ah, Salesforce Appexchange ayaa leh isdhexgalka wax soo saarka leh shirkado badan oo Suuqgeyn ah dhufto.
Cafiska Iibka - Qalabaynta Suuqgeynta B2B waxay u rogtaa suuqleyda maalinlaha ah halyeeyo dakhli abuuraya. Barnaamijkooda otomatiga ee suuqgeynta ayaa bixiya suuq geynta emaylka, jiilka hogaanka, maareynta hogaaminta, isku dheelitirka iibka iyo warbixinta ROI.
Teradata Codsiyada Suuqgeynta - Ku guuleysashada firfircoonaanta suuqgeynta, u faham macaamiisha shaqsi ahaan, iyo ku fuliso isgaarsiinta dhijitaalka ah ee awoodda leh kanaal kasta oo leh Codsiyada Suuqgeynta Teradata.
Suuqgeynta Qalabaynta Suuqgeynta sidoo kale wuxuu muujiyaa celceliska kharashka rukhsadda, kuwaas oo hoos u dhacay markii ay tirada tartamayaashu cirka isku shareereen. Waad isbarbardhigi kartaa dhammaan qalabka otomaatigga ee suuqgeynta 10 ilbidhiqsi gudaha Suuqgeynta Aaladda Suuqgeynta.
Isbarbar dhig Qalabka Suuqgeynta Suuqgeynta
Tags: Act-Onsoftware-ka ku shaqeeyafalsoftware actonadobeaprimodad badancodkarnimosaxsanGenoocunsuriyadhubspothubspot lagu ciyaari karoqulqulka shaqadaIBMxalalka suuq geynta ibmibm silverpopibm unicaInfusionsoftinswelraloopfusesuuqasuuq geynta suuqasuuqgeyntasuuqosuuq dad badanMicrosoftsuuq geynta microsoftneolanegaroonka diyaaradahaOraclecafisfulin karokororka otomaatiga suuq geyntaiibincafiska iibkaiibintaSilverPopteradatacodsiyada suuqgeynta teradatakaliyamaxamed
Jul 20, 2016 markay ahayd 5:13 AM
Burburka cajiibka ah ee taariikhda otomaatiga suuq geynta waana wax xiiso leh in la arko inta aan soo gaarnay.
Febraayo 14, 2017 saacadu markay tahay 2: 16 AM
Liis aad u wanaagsan oo ka mid ah suuq-geynta suuq-geynta ugu sareysa softwares.Waxaan jeclahay infusionsoft inta badan sababta oo ah sifooyinka laga cabsado ee ay bixiso.
Salesforce ayaa si aad ah u koray iyadoo heshay shirkado badan.